I-Honeymoon Cruises - Amathiphu, Imibono, Amanani nokuningi | Ukuhamba kwe-Absolut
Ingabe ucabanga ngakho i-honeymoon cruise? Noma ngabe uyashada noma ufuna ukunika lowo mngani omkhulu isipho sempilo yakho, lezi zinhlobo zohambo zihlala ziyindlela enhle. Ngaphezu kwalokho, uma ungomunye wabalingiswa abaphambili, kusobala ukuthi ngemuva kokuxineka komshado, kuhlale kulula ukuphumula.
Yini engcono kunesikebhe, kude nolwandle futhi uphumule ezinkingeni noma ngokushesha. Kungakho ukuhamba ngesikhathinxi se-honeymoon kungomunye wemibono ephelele ye- Isikhathi sasebusuku ukuphupha. Ngakho-ke, namuhla sigxila kokubili kuzinzuzo zako nasezinyathelweni okufanele uzithathe ukuyihlela kanye neminye imininingwane eminingi odinga ukuyazi.
1 Uyihlela kanjani i-honeymoon cruises
1.1 Khetha indawo yomzila
1.2 Bhuka kusengaphambili
1.3 Thola amaphakheji wabasanda kushada
1.4 Imibhalo yakho, ihleleke njalo
2 Izinzuzo zokuqasha i-cruise ye-honeymoon yakho
2.1 Ukhohlwa ukucindezeleka
2.2 Akukhona konke ukuphumula, kuzoba khona nemisebenzi
2.3 Ungavakashela izindawo ezahlukahlukene
2.4 Enye yezilungiselelo zothando kakhulu
3 Ibhukha kuphi i-honeymoon cruise?
4 Ibiza malini i-honeymoon cruise?
Uyihlela kanjani i-honeymoon cruises
Thatha izinyathelo zokulungisa, ngesikhathi se- hlela uhambo, ihlala iyimpumelelo engcono kakhulu. Ngoba kuyiqiniso ukuthi ezinye izimanga zingavela, kepha lapho konke sesikubophe kahle, kuba nzima kakhulu ukwenza lokho. Ukuze uqale ukuhlela uhambo lwakho, kufanele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
Khetha indawo yomzila
Kujwayelekile ukuthi kuze kube sentwasahlobo kuze kube sekupheleni kwehlobo, izinkampani eziningi zinohambo lwalolu hlobo. Ngoba yisikhathi semishado futhi yingakho imibhangqwana eminingi ikhetha ukuhamba ngesikebhe ku-honeymoon yabo. Okokuqala kufanele ucabange uhlobo luni lohambo ongathanda ukulwenza. Okungukuthi, umzila. Enye yezinto ezivame kakhulu yilowo odabula iMedithera, ngaphandle kokungayinaki iCaribbean. Kepha uma ungafuni ukuzibona uzungezwe abantu abaningi kangaka, kuhlale kunezinye izindlela ezincane ezihamba ngomkhumbi ziye kwezinye izingxenye zeYurophu. Lokhu kufanele ubonisane kahle ngaphambi kokukhetha.
Kuyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi, cishe ngomzuzu wokugcina, sisenakho ukukhetha yenza ukubhuka. Sithole amanani entengo athe xaxa. Kepha iqiniso ukuthi uma sikhuluma ngezikebhe ze-honeymoon, kungcono ukubhuka kusengaphambili. Ngaphezu kwanoma yini, ukuqinisekisa i-stateroom yethu enokubukwa noma enye yalawo masuti abanzi nenhle, khetha kahle ukuthi yikuphi okungcono kakhulu kithi nosuku nomzila, njengoba sishilo.
Thola amaphakheji wabasanda kushada
Ingqikithi ye-honeymoon ingenye yezinto ezivame kakhulu ezivela kuzo zonke inkampani yezokuvakasha noma iwebhusayithi kuwufanele usawoti wawo. Kungakho ezinye zazo zinamaphakethe akhethekile. Kuzo, zifaka izinsizakalo ezahlukahlukene ngamanani aphansi. Okusho ukuthi, bangaba nesipho esamukelekayo, ibhodlela lewayini noma i-cava, ukudla kwasekuseni noma idina, ukubhucungwa, njll. Inkampani ngayinye izoba nemininingwane yayo noma imisebenzi yabashadikazi. Ngakho-ke, akufanele uphuthe lezi zinhlobo zamaphakethe, ngoba azokumangaza.
Imibhalo yakho, ihleleke njalo
Ngenye yalezi zeluleko okufanele sizicabangele. Kuyiqiniso ukuthi mhlawumbe alingeni ngaphakathi kwenhlangano, kepha akufanele sikukhohlwe. Ngaphezu kwemibhalo ngayinye, ngesimo se- ipasipoti noma i-IDKubalulekile futhi ukuthi uze nencwadi ekhombisa ukuthi ushadile. Akudingeki ngaso sonke isikhathi, kepha ukujabulela ukunikezwa okuthile namaphakeji esisanda kuwasho, kunezinkampani eziningi ezingazicela.
Izinzuzo zokuqasha i-cruise ye-honeymoon yakho
Uma usungene esikebheni sakho, uzoba nakho konke okuseduze. Ngakho-ke sizokhululeka ngaphezu kokucabanga kwethu. Akudingeki ukuthi sihambe sisuka kwenye indawo siye kwenye, noma sicabange ngamashejuli noma uhambo, njengoba kwenzeka kwezinye izinhlobo zohambo. Okuhle kakhulu yilokho singaphumula noma sinqamule futhi kuyinto edingeka kakhulu. Njengoba sazi, ngemuva kokuhlela umshado, uhlala udinga isikhathi sakho kanye nesababili.
Akukhona konke ukuphumula, kuzoba khona nemisebenzi
Singasho ukuthi ukuphumula okuhlobene. Kuyiqiniso ukuthi ungayithatha ngendlela ekhululekile, kepha kwimibhangqwana engenakho ukuthula, kunezinye izindlela. Emkhunjini, uzohlangana imikhuba yezemidlalo, imincintiswano nemidanso, phakathi kwezinye izinketho. Konke kuzoba mnandi kakhulu. Ngaphezu kwalokho, uma ukhethe ukuma okuhlukile, ungahamba futhi uthole amadolobha amasha. Ungahlanganisa kokubili ukuphumula nokusebenza ngokwengeziwe.
Ungavakashela izindawo ezahlukahlukene
Akufani nokwenza ngenye indlela yezokuthutha. Njengoba kwezinye, impela besizochitha isikhathi esithe xaxa sisuka kwenye indawo siye kwenye. Kulokhu, ukuba sesikebheni kusho nokusebenzisa isikhathi futhi akubonwa njengokuhamba okulula. Noma kunjalo, uzoba nezitobhi eziningi futhi ungakwazi yenza ukubuka indawo okuncane kodwa ngaphandle kwengcindezi. Uzokhohlwa ngamapotimende noma ukujaha, ngoba yonke into izolawulwa kahle futhi njengeqembu.
Enye yezilungiselelo zothando kakhulu
Kuyiqiniso ukuthi ukulungiselelwa kwezothando kungatholakala njalo. Kepha uma sikhuluma ngemikhumbi ye-honeymoon lapho-ke sesivele sinayo kulawo magama. Kungumbhalo omuhle impela, njengoba uzungezwe izindawo ezahlukahlukene, ulwandle kanye ne- Isimo sothando sibonga yonke imihlomulo esinikezwa lolu hambo. Ngenkathi yonke i-honeymoon ingenakucimeka, kulokhu kunjalo kakhulu.
Ibhukha kuphi i-honeymoon cruise?
Ngakolunye uhlangothi, singaya noma yikuphi ejensi yokuvakasha eduzane, ukuthi basazisa kahle ngenkampani ngayinye, ngamaphakeji abawanikeza imibhangqwana esanda kushada nezindawo ezihambela kuzo. Kepha ngakolunye uhlangothi, ungavula futhi umlomo wakho kumawebhusayithi ahlukene anenkampani ngayinye yezikebhe anayo nasezinjini zokusesha. Njengoba kuzo ungafinyelela lonke ulwazi. Izaphulelo nokunikezwa kuzovela, kepha ngokungeziwe, izindawo ezinjengeziqhingi zaseGrisi noma iCaribbean zizoba ezinye zezindawo ezidume kakhulu, ngaphandle kokukhohlwa iDubai noma iYurophu esenyakatho.
Ibiza malini i-honeymoon cruise?
Amanani angahluka kakhulu kuye ngezindawo. Njengomthetho ojwayelekile sihlala sikhuluma ngawo isonto lokuhamba. Ngemuva kwalokho, kufanele sikhethe indawo esiya kuyo noma izindawo esizozivakashela futhi ezisilindele kulolu hambo lwezothando. Amaphakethe afaka phakathi imisebenzi, ukubhucungwa noma imininingwane ethile esixoxe ngayo.
Al 'konke kuhlanganisiwe' Ukudla kuvame ukungezwa kuwo kanye namanani ahlukahlukene ngisho nokuvakasha. Ngakho-ke, kufanele sizazise futhi sifunde inketho ngayinye kahle. Amanye amanani avame ukubonwa ezinjini zokucinga aqala kusuka ku-1000 euros umuntu ngamunye. Njengoba sisho, kufaka phakathi konke okuphathelene nohambo. Uma kufanele uhambise uzoba nokuhlinzekwa ongakuhlanganisa kwiphakethe ngalinye. Ungahamba ngesikebhe ngesikhathi sakho sangemva komshado?
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Honeymoon Cruise